WebP: GNU / Linux တွင် Open source ပုံရိပ်ပုံစံကိုစီမံခြင်း Linux မှ
WebP - GNU / Linux တွင် Open Source ပုံသဏ္formatာန်ကိုစီမံခြင်း
WebP - Linux တွင်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ပုံရိပ်ပုံစံကိုစီမံပါ
WebP တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် image ကို format နဲ့ de open source ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး Google လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက, တိုးတက်စေရန် ပုံစီမံခန့်ခွဲမှု သူတို့ကိုလုပ်နေသည့်အခါ ပိုမိုပေါ့ပါးသည် စောင့်ရှောက်ခြင်း အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုမြန်ဆန်စွာကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်။
ထိုအချိန်မှစ။ အသစ်ကဆိုသည် ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာစံ ကဲ့သို့သောလူကြိုက်များပြီးရိုးရာပုံသဏ္formာန်ပုံစံများသို့ပြောင်းခြင်း JPG, PNG y GIF ကို, ဝဘ်ပေါ်တွင်သာမကကဲ့သို့သောအက်ပလီကေးရှင်းများပေါ်တွင်ပိုမိုအသုံးပြုလာသည် WhatsApp ကို y ကွေးနနျးစာ မင်းကိုဖန်တီးဖို့ စတစ်ကာများ၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုများစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကအထူးသဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်ဖြစ်သည် FromLinux ဘလော့ ကျနော်တို့ပုံစံအကြောင်းကိုပြောဆိုပါ WebP နှင့်တစ် patch ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဘယ်လိုပေါ် GIMP။ ထိုအချိန်မှစ၍ ပုံစံကိုဖန်တီးပြီးနောက် ၅ နှစ်အကြာတွင် WebP က၏လျှောက်လွှာအားဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်မခံခဲ့ရပါဘူး GNU / Linux များ.
ဒီနေ့ခေတ်တွင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်အထုပ်ကတည်းကကတည်းကမလိုအပ်တော့ပါ «gimp-webp» အများအပြားတွင်ပါဝင်သည် repositories အများအပြား GNU / Linux Distros။ ထိုအခါစာကြည့်တိုက်ကနေတဆင့်ထောက်ခံမှုအထုပ်အောက်မှာအချို့အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် «libwebp5» o «libwebp6».
1 WebP: ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ပုံသဏ္Formာန်
1.1 Thunar ရှိ WebP ပုံရိပ်များ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
1.2 WebP ပုံများကိုကြည့်ရှုတည်းဖြတ်ပါ
1.3 WebP ရုပ်ပုံများကိုဖန်တီးရန် (ပြောင်းလဲရန်) အွန်လိုင်းကိရိယာများ
ပုံစံ WebP တစ်ခုရှိပါတယ် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် အဲဒါကိုအဖြစ်ဖော်ပြထားတဲ့ဘယ်မှာ:
"WebP သည်ခေတ်မှီပုံသဏ္formatာန်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ဝဘ်ပေါ်ရှိပုံရိပ်များအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သော lossless နှင့် lossy compression ကိုပေးသည်။ WebP ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ ဝက်ဘ်မာစတာများနှင့်ဝဘ်တီထွင်သူများသည် ၀ က်ဘ်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေသည့်ပိုမိုသေးငယ်။ ပိုမိုကြွယ်ဝသောပုံများဖန်တီးနိုင်သည်။".
"WebP ဆုံးရှုံးမှုပုံရိပ်များသည် PNG များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရွယ်အစား ၂၆% ပိုသေးသည်။ Lossy WebP ပုံများသည်ညီမျှသော SSIM အရည်အသွေးအဆင့်ရှိသည့်နှိုင်းယှဉ် JPEG ပုံများထက် ၂၅-၃၄% ပိုသေးသည်။ အရှုံးမရှိသော WebP သည် ၂၂% ထပ်၍ ထပ်တိုးသောတန်ဖိုးများကို (alpha channel ဟုလည်းခေါ်သည်) ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုထောက်ပံ့သည်။ lossy RGB compression သည်လက်ခံနိုင်သောဖြစ်ရပ်များတွင် lossy WebP သည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုထောက်ပံ့သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် PNG နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဖိုင်အရွယ်အစား ၃ ×သေးငယ်သည်။".
Thunar ရှိ WebP ပုံရိပ်များ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
ကျွန်ုပ်အမှု၌၊ ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းကိုအသုံးပြုသည် MX Linuxသောကိုအသုံးပြုသည် XFCE Desktop ပတ်ဝန်းကျင် မူလကထိုနည်းစနစ်သည်ကိုင်းတွင်ရှိသောသမ်းနေးများကိုဖော်ပြရန်အောင်မြင်စွာအသုံးပြုခဲ့သည် Thunar ဖိုင် Explorer အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
ဟုခေါ်သည့်ဖိုင်ဖန်တီးပါ «webp.thumbnailer» အောက်ပါ Command ဖြင့်:
ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသူ session ကိုနှင့်စမ်းသပ်မှု Restart သွန်း ပုံရိပ်များ၏ thumbnails ကြည့်ရှုရန် WebP.
ထိုကဲ့သို့သောတာဝန်များအတွက်, ငါအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည် ရုပ်ပုံကြည့်ရှုသူ Nomacs နှင့်ပုံအယ်ဒီတာ XnConvert။ ပုံရိပ်အသုံးချပရိုဂရမ်များအားလုံးကိုပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ထောက်ပံ့နေဆဲမဟုတ်ပါ WebP ။ တချို့ကငါသူတို့ကိုဆဲပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ရှုပြင်ဆင်ရန်မရနိုငျသော WebP es GPicVieweInkscape.
WebP ရုပ်ပုံများကိုဖန်တီးရန် (ပြောင်းလဲရန်) အွန်လိုင်းကိရိယာများ
ဖြစ်ရပ်တွင်, လက်ပေါ်မှာရှိခြင်းမဟုတ် GNU / Linux များ ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်အတွက်အသုံးဝင်သော application တစ်ခု၊ ဖိုင်ပုံစံများစသည့်အရာများကိုပြောင်းလဲရန်အွန်လိုင်းကိရိယာများစွာအမြဲရှိသည် ပုံရိပ်။ ဒါပေမယ့်အထူးသဖြင့်ပုံရိပ်တွေအတွက် WebP ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားသင့်သည် - ပြောင်းသည်.
နောက်ဆုံးသင်ပုံစံကိုဘယ်လိုအကြောင်းနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ချင်လျှင် WebP ဖန်တီးရန်အသုံးပြုသည် ကြေးနန်းနှင့် WhatsApp စတစ်ကာများနောက်တစ်ခုကိုနှိပ်ပါ link ကို.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" လို့ခေါ်တဲ့ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ပုံရိပ်အမျိုးအစားအကြောင်းကို «WebP» လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကဂူဂဲလ်မှဖန်တီးခဲ့သောဤပုံသဏ္withာန်ဖြင့်ပုံများကိုမည်သို့စီမံခန့်ခွဲရမည်ကိုဖန်တီးခဲ့သည် GNU / Linux များ; အများကြီး အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုတစ်ဖွဲ့လုံးအတွက် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » WebP - GNU / Linux တွင် Open Source ပုံသဏ္formatာန်ကိုစီမံခြင်း
WebM - GNU / Linux ပေါ်ရှိအရင်းအမြစ်ဗွီဒီယိုဖိုင်ကိုစီမံပါ